Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Värmlands län / Arvika
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 28 7 2020
In isla meesha la taagnaado waxeey la mid tahay in gadaal loo socdo – Arviika waa degmad horay uu socoto. Dad ahaan markii loo fiiriyo degmada Arvika labaad ayee ka soo galee Värmland, ayadoo leh 26 000 oo qof.
1,956 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlstad 75 kiilomitir
Oslo 157 kiilomitir
Göteborg 255 kiilomitir
Bartamaha Arvika waxaa dagan in ka badan dadka degan degmada haafkooda. Arvika waxeey lee dahay tayo-nololeed oo sareeyso, halkaase ee dhawaanshaha ka dhaxeeyo dadka uu keenaayo amaan lagu daremo iyo dheelitirid dhinaca nolosha.
Degmada Arvika waxaa ku yaalo shirkado guri degmadeed iyo kuwo madaxbanaan. Halkaan waxaa laga dooran karaa in la dago guri, guri saf ah ama filo haddii la rabo in la gato ama la kireeysto guriga. Shirkada degmada ee lee dahay Arvika Fastighets AB waa maamulaha guri ee ugu weeyn ayadoo heeyso ku dhawaad 3,000 oo guri.
Arvika waxaa ku matalaan koox-luqadeed badan. Taasi waxaa keenaayo in degmada sanadooyin badan qaabileeysay qaxooti laakin sido kalena in ee degmo tahay mid dabiicad qurxon leh oo dad badan sababtaas uu imaadeedn. Koox-luuqadeedka ugu waa af soomaali, af carabi, afka albaaniya, afka boosniya, afka iraan, af daari, af urdu, af isbaaniyol, af jarmal iyo afka hooland.
Waxaa jiro ku dhawaad 370 ururo ka howl galo howlo xilli firaaqo, dhaqan iyo diin. Waa jiraan in ku filan oo goob isboorti iyo goob jimicsi ee gudaha degmada, jidad lagu socdo ee gudaha bey'ad leh dabiicad qurxoon, jawi hees oo taajir laga yahay, yar iyo weeynba ee ku jiraan. Farshaxan iyo dhawan waa mid uusoo hormarsan dhismaha. Halkaani waxaa ka jiro urur soomaali iyo keldansk iyo xarun islaami iyo kaniisado sidii kaniisada iswiidhan, kaniisada faafinta, kaniisada bingst iyo shuhuud yaho.
Arvika waa degmad oo hamiyaal badan ku heshiyaan. Halkaan waxaa ku yaalo dukaamo cunto oo sii fiican uu kala socan, suuq dhaqameed, maqaayado leh cunto iswiidhish ama cunto dhaqama kala duwan, kafeteeriyo, dukaamo dhar oo leh nuuca ugu danbeeyay iyo dukaan gacan labaad.
Halkaan waxaa ku yaalo xafiiska dad weeynaha, maktabad, xafiiska shaqada, qasnada ceeymiska, xafiiska canshuuraha iyo xafiiska bulshada. Nolosha ganacsiga waa mid kal duwan, laga bilaaba dukaanka yar ee bartamaha ku yaalo ilaa dukaanka dhismaha ee xooga ka weeyn oo jiro in yar oo ka baxsan bartamaha. Alaab guri iyo maacuun waxeey jirta ayadoo leh qiimo kala duwan, waxaana jiro dukaamo gacan labaad oo badan dhexbartanka magaalada. Arvika waxeey ku dhawaad uu jirtaa hal saac Karlstad, halkaas oo IKEA ku yaalo.
Xanaanada caruurta waxeey ku taala degmada oo dhan, waxeeyna ka kooban tahay dugsiga xanaanada caruurta, xanaaneeyn waxbarasho, dugsiga xanaanada guud ee 4-5 jirka, dugsi xanaanada furan, guriga xilliga firaaqda iyo ilaalin mudada fasaxa.
Arvika waxaa ku yaalo 17 dugsi hoose ee degmadeed iyo labo dugsi sare ee degmadeed oo leh inta badana ee barnaamijyada qaranka. Sido kale waxaa jiro dugsiyaal hoose ee qeeybta sare iyo dugsiyaal sare oo madax banaan, waxeeyna lee yihiin jiheeyn farshaxaneed. Dugsiga degmadeed ee heesaha waxaa la iska wargali karaa haddii la jecelyahay in la heeso ama in qalab heeso la ciyaaro xilliga firaaqada.
Xarunta Arvika ee ganacsiga waxuu fursad uu yahay qofka weeyn oo rabo waxbarasho. Halkaan waxaa ku taalo xarunta waxbarashada oo lagu dhigan waxbarasho kala duwan ee heer jaamceed iyo waxbarasho-masaafaded, waxbarashada sare ee xirfad shaqo iyo waxbarasho howl la dooray. Halkaan waxaa lagu qabtaa waxbarahada iswiidhiska soo galooytiga, waxbarashada dadka waa weeyn ee gaarka ah iyo waxbarshada heerka dugsi sare. Sido kale Arvika waxaa ku yaalo dugsiga dadka waa weeyn e Ingesund iyo jaamcada heesaha ee Ingesunds.
Xarunta Arvika ee ganacsiga Dugsiga dadka waa weeyn e Ingesund Jaamcada heesaha ee Ingesunds
Arvika waxaa ku talo labo rug caafimaad oo ku xiran doorshada-caafimaadka Värmland; rugta caafimaadka Verkstaden iyo Kinnekullehälsan. Isbitalka ku yaalo Arvika waxuu hayaa takhasuska badankiis, waana hal ka mid ah sadax isbitaal ee Värmland.
Madaama aan lee nahay baahi isfahmid ee labada geesba ah, waxaan qabana turjumaan markii loo baahdo. Waxeey ku saabsanaa kartaa shaqo, iskuul, booqasho hey'ad dowaleed iyo daryeelka bukaanka. Turjumaanida badankeed waa mid taleefooneed.
Arvika waa ka fog tahay waana dhow dahay.Meesha uu ku yaal wadada tareenka ee Arvika oo ah geeska jidka tareenka – Stockholm – Oslo waxeey keneeysaa xariir fiican ee la yeelato labada magaalo madax. Boosteejada-baska ee Arvika waxaad ka qaadan kartaa baska kuugu wareejinayo Arvika asago dhexmaraayo xaafadaha, laakin waxaad uu sii raaci kartaa in ugu tagto basaska meelaha dheer aad ee ka tirsan yihiin meelahaas Stockholm, Göteborg iyo Örebro.
Ayadoo ee jirto ku dhawaad 11 000 shaqo, Arvika waa degmada muqaalkeeda shirkadeed uu horseedaayo warshadaha soo saarida, waxuu ku yaalo shirkadaha weeyn sidii Volvo, Thermia iyo Sweden, laakin sido kale halkaan waxaa ku yaalo shirkad ka sii ar oo leh xirfad sareeyso. Daryeelka, waxbarshada iyo ganacsiga waa howlo kale oo leh shaqooyin badan. Ku dhawaad 1 500 oo qof ayaa ka soo safro degmooyinka dariska ah, oo uu safro shaqooyinkooda ee gudaha Arvika
Shaqooyinka ka banaan gudaha Arvika